Nhau - Kutenga hunyanzvi hwe auto zvikamu
1. Tarisa kuti mubatanidzwa wakatsetseka here. Munguva yekufambisa uye chengetedzo yezvipenga zvikamu, nekuda kwekudengenyeka uye kubonderana, burr, induction uye kutyora kunowanzoitika pachikamu chakabatana.
Kukuvadza kana kutsemuka, kuchikanganisa kushandiswa kwezvikamu. Teerera kutarisa kana uchitenga.
2. Tarisa kuti chiratidzo chacho chakakwana here. Iyo yekunze kurongedza mhando yezvokwadi zvigadzirwa zvakanaka, iwo manyore pabhokisi rekurongedza akajeka uye iro rakapetwa ruvara rwakajeka. Bhokisi rekutakura uye bhegi zvinofanirwa kuiswa zita rekuti chigadzirwa, kutaurwa uye modhi, huwandu, chiratidzo chakanyoreswa, zita repafekitori, kero uye nhamba yefoni, nezvimwewo vamwe vagadziri vanoitawo mamaki avo pane izvo zvekushandisa. Zvimwe zvikamu zvakakosha, senge jenareta, muparidzi, pombi yekupinza mafuta, nezvimwewo, zvakagadzirirwa bhuku rekurairidza, chitupa uye chisimbiso chemuongorori kutungamira vashandisi kuti vashandise nekuchengetedza nemazvo. Kana uchitenga, unofanirwa kuiziva nekungwarira kuti usatenge zvigadzirwa zvemanyepo uye zvakaderera,
3. Tarisa kuti zvikamu zvinotenderera zvinoshanduka here. Paunenge uchitenga pombi yemafuta uye zvimwe zvikamu zvinotenderera musangano, tenderedza iyo pombi shaft neruoko, iyo inofanirwa kuve inochinjika uye isina kudzika. Paunenge uchitenga mabhegi anotenderera, tsigira yemukati yekutakura mhete neruoko rumwe uye tenderedza rin'i yekunze nerumwe ruoko. Mhete yekunze inofanira kukwanisa kutenderera nekukurumidza uye zvakasununguka, uye yobva yamira kutenderera zvishoma nezvishoma. Kana zvikamu zvinotenderera zvikasashanda mushe, zvinoreva kuti ngura yemukati kana deformation, usatenge.
4. Tarisa kuti nzvimbo yekudzivirira iri mumamiriro akanaka here. Mazhinji mativi akafukidzwa nekudzivirira kupfeka kufekitori. Semuenzaniso, pini repiston uye rinotakura gwenzi zvinodzivirirwa newakisi yeparafini; pamusoro pemhete yepiston uye silinda liner yakafukidzwa nemafuta antirust, uye vharuvhu nepisitoni zvakaputirwa nepepa rekumonera uye rakanamwa nemapurasitiki mushure mekunyudzwa mumafuta antirust. Kana ruoko rwechisimbiso rwakakuvadzwa, bepa rekutakura rakarasika, oiri yeantirust kana parafini yakarasika, inofanira kudzoserwa uye kutsiviwa.
5. Ongorora geometric divi kuti deformation. Zvimwe zvikamu zviri nyore kuremara nekuda kwekugadzira zvisirizvo, kutakura uye kuchengetedza. Kana uchitarisa, iwo shaft mativi anogona kutenderedzwa akatenderedza girazi ndiro kuti aone kana paine mwenje leakage pane mubatanidzwa pakati pezvikamu uye girazi ndiro yekutonga kana yakakombama; paunenge uchitenga ndiro yesimbi kana kukwesheni ndiro yeplutch inotya ndiro, unogona kubata ndiro yesimbi uye kukwesheni ndiro pamberi pemaziso ako kuti uone kana yakakombama. Paunenge uchitenga chisimbiso chemafuta, kumagumo kumeso kwechisimbiso chemafuta nehurongwa chinofanira kunge chakatenderera, icho chinogona kukwirana negirazi rakatsetseka pasina kukombama; Rutivi rwekunze rwechisimbiso chemafuta chisina mwero chinofanira kuve chakatwasuka uye chakaremara neruoko. Inofanira kukwanisa kudzokera kune yayo yepakutanga mamiriro mushure mekuiburitsa. Mukutengwa kwemhando dzakasiyana dzepads, inofanirwa zvakare kuteerera kutarisa saizi yejometri uye chimiro
6. Tarisa kana zvikamu zveungano zvisipo. Normal gungano zvikamu zvinofanirwa kuve zvakakwana uye zvakaomarara kuve nechokwadi chakatsetseka gungano uye zvakajairika mashandiro. Kana zvimwe zvidimbu zvidiki pane zvimwe zvikamu zveungano zvisipo, zvikamu zveungano hazvishande kana kutomboraswa.
7. Tarisa uone kana iyo nzvimbo yezvikamu isina ngura. Iko pamusoro kwenzvimbo dzakakwanisirwa zvikamu zvine zvese imwe chaiyo uye yakapfava kupera. Izvo zvakanyanya kukosha izvo zvikamu zvekusarudzira zviripo, iko kukwirira kunyatso kuri, uye zvakanyanya kusimba anti anti ngura uye anti-ngura kurongedza kuri. Teerera kutarisa kana uchitenga. Kana zvikamu zvacho zvikawanikwa zvine mavara engura, nzvimbo dzehuvhu kana zvikamu zverabha zvakatsemuka uye zvobva zvaserera, kana paine mitsara yekushandura zviripo pane pepanhau, zvinofanirwa kutsiviwa.
8. Tarisa kana zvikamu zvekubatanidza zvakasununguka. Kune zvishongedzo zvinoumbwa nezvikamu zviviri kana kupfuura, zvikamu zvinotsimbirirwa, zvakanamirwa kana kusunganidzwa, uye hapana kusununguka kunotenderwa pakati pavo. Semuenzaniso, iyo pombi yemafuta pombi uye ruoko rwekugadzirisa zvakaunganidzwa nekutsimbirira, batira rinotyairwa vhiri uye ndiro yesimbi yakasungirirwa, ndiro yekukwesana uye ndiro yesimbi yakasungwa kana kunamwa; iyo firita firita element dhizaini yakanamatira kune iyo firita bepa; Iyo waya inoguma yemidziyo yemagetsi yakasungwa. Kana paine chero kusununguka kunowanikwa panguva yekutenga, iyo s